Nyika zhinji dzakabatanidzwazve nedenda reCovid, WHO inoyambira kuti inogona kupfuura mamirioni mazana matatu emakesi muna 2022
Sangano reWorld Health Organisation rakayambira musi wa11 kuti kana denda iri rikaramba richikura zvinoenderana nezviri kuitika, kutanga kwegore rinouya, huwandu hwepasi rose hwenyuchi dzemabayo dzinogona kudarika mamirioni mazana matatu. Director-WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus akataura kuti WHO iri ...
Covid-19 Delta Virus iri kuuya zvinotyisa, Southeast Asia hupfumi hwaderera
Muna Gumiguru 2020, Delta yakawanikwa muIndia kekutanga, izvo zvakatungamira zvakananga kune wechipiri wave wekukura kukuru muIndia. Iko kushushikana hakungori chete kunotapukira, kukurumidza kudzokorora mumuviri, uye nguva yakareba yekushanduka isina kunaka, asiwo vanhu vane hutachiona vanowanzo kukura ...
Denda muSoutheast Asia rakawedzera, uye nhamba huru yemakambani eJapan akavhara
Nekusimbiswa kweiyo nyowani korona pneumonia denda munyika zhinji dzeSoutheast Asia, makambani mazhinji akavhura mafekitori imomo akakanganiswa zvakanyanya. Pakati pavo, makambani eJapan akadai seToyota neHonda akamanikidzwa kumisa kugadzirwa, uye kumiswa uku kwave ne ...
Immunoassay heterogeneity uye zvinorehwa neSARS-CoV-2 serosurveillance
Serosurveillance inobata nekufungidzira kuwanda kwezvirwere mumuviri zvinopesana neimwe pathogen. Inobatsira kuyera hutachiona hwehuwandu hwevanhu mushure mehutachiona kana hutachiona uye hune hutachiona hwehutachiona mukuyera njodzi dzekuparadzira uye huwandu hwehutachiona hwevanhu. Mune iyo cur ...
COVID-19: Mishonga yekudzivirira vector inoshanda sei?
Kusiyana nemamwe majekiseni akawanda ane hutachiona hutachiona kana chimwe chikamu chawo, majekiseni ehutachiona anoshandisa hutachiona husina njodzi kuendesa chidimbu chemageneti kodhi kumasero edu, achiabvumira kuti agadzire puroteni yepathogen. Izvi zvinodzidzisa immune system yedu kuita kune hutachiona hunouya. Kana tine bac ...
COVID-19 inosimbisa kudiwa kwekukurumidza kwekutangazve kuyedza kwepasirese kupedza tibhii
Zvinofungidzirwa kuti vanhu vashoma vanosvika miriyoni nemazana mana vakachengetwa tibhii (TB) mugore ra2020 kupfuura mugore ra2019, maererano nedata rekutanga rakaunganidzwa neWorld Health Organisation (WHO) kubva munyika dzinopfuura makumi masere- kuderedzwa kwe21% kubva muna 2019. Nyika dzine chikuru hama mipengo yaive Indonesia (42%), Saka ...